Ny Antenimierandoholona no nampiatrano ny fivorian’ny Vaomiera iraisana isasahana na « Commission mixte paritaire », ny depiote no nanao tatitra dia nanapa-kevitra ny praiminisitra, ary nolanian’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny ambongadiny ny volavolan-dalàna laharana faha 001/2020, izay nananganana ilay Vaomiera.
Gaga ny rehetra. Fisalovanan’andraikitra sy fandikana fitsipika ankitsirano no nataon’ny tao Tsimbazaza nanao tatitra tamin’ny anaran’ny Vaomiera, hoy ny sasany.
Fanonganam-panjakana tsotra izao, hoy indray ny hafa.
Manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisin’ny Governemanta amin’ny fanohizana ny fandaniana ilay volavolan-dalàna laharana faha 001/2020 dia nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao ny talata 01 septambra 2020.
Nilaza izy fa tokony niandrasana ny firaketana an-tsoratra ny tatitry ny fivoriana avy amin’ny Vaomiera iraisana isasahana vao nandray fanapahan-kevitra ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian.
Nanao tatitra tao anatin’ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehana tao amin’ny Antenimierandoholona,ny 01 septambra 2020, ireo Loholon’i Madagasikara mpikambana ao amin’ny Vaomiera iraisana isasahana (« commission mixte paritaire ») mikasika ny fivoriana izay niarahany tamin’ny solombavam-bahoaka ny 31 aogositra.
Araka ny tatitra izay novakin’ny mpampakateny dia lanin’ny maro tamin’ny alalan’ny fananganan-tanana nandritry ny fivoriana fa amin’ny maha « ratification » ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020 dia tsy manana fahefana ny handinika izany ny vaomiera iraisana isasahana.
Valo (08) tamin’ny 14 no nandany izany, iray (01) Solombavambahoaka ary fito (07) Loholon’i Madagasikara. Ireo mpikambana tompontoerana ihany no nandray anjara tamin’ny fandaniana izany, ary talohan’ny hananganan-tanana dia nandao ny toeram-pivoriana ny mpikambana enina (06) avy amin’ny Antenimieram-pirenena.
Marihina fa manana mpikambana tompon-toerana fito (07) sy mpisolo toerana fito (07) avy ao amin’ny Vaomiera iraisana isasahana ny Antenimiera roa tonta.
Nambaran’ireo Loholon’i Madagasikara nandritra ny fanamarihana izay nataon’izy ireo, fa ny lalàna ihany no tokony arahina, satria efa voalaza ao amin’ny fitsipika anatin’ny Antenimiera roa tonta fa tsy azo kitihana ny volavolan-dalàna raha lalàna hatao “ratification” na lalàna fehizoro.
Nohamafisin’izy ireo fa ny Antenimierandoholona dia tsy sakana amin’ny fampandrosoana fa mitady hatrany ny mahasoa sy ny mahatsara ny firenena. Teo ihany koa ny nilaza fa tsy tokony natsangana ny Vaomiera iraisana isasahana raha ireo karazan-dalàna roa ireo no tsy nitovian-kevitra tamin’ny Antenimiera roa tonta.
Nampatsiahy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao fa tokony ho sarahana ny fandinihana ireo didy hitsivolana telo ao anatin’ny volavolan-dalàna 001/2020, ary efa nangatahana tamin’ny Governemanta izany fa tsy nisy valiny. Nambarany fa tokony hijery lavidavitra kokoa ny mpitondra Malagasy ka ny tombotsoan’ny vahoaka no jerena.